Last updated: Oct. 17 2020 | 2 Maminitsi verenga
Ita ichi chirimo sizzle – pamwechete pamusoro yedu 6 musi nemazano mwaka uyu!
1. Enda Hiking
Budai imomo uone avo kunzvimbo dzose wabatwa zvichireva kuona. Kwete chete akaita tsvakurudzo vakaedzwa kuti Hiking kunonatsiridza utano hwako, Kunobatsirawo nguva uye nzvimbo pakunyatsoziva zuva rako. The kunakidza nzvimbo, kashoma netsa Anonyaradza uchawana – sezvo pachava nguva dzose kuva chinhu kutaura pamusoro!
2. Yakarova yokurovedza muviri pamwe chete
Ungave uri gym mupengo kana kutanga kubuda, kuenda yokurovedza muviri nguva dzose zvinonakidza zvikuru ine yokurovedza muviri-Buddy. Iwe zuva anogona kuita sekushamwaridzana nemumwe mudzidzisi, nokusika pachako musasa wako vene mbiri. Ndiyo nzira yakarurama kuti afuridzire utano makwikwi pakati penyu.
3. Enda kune mumwe mutambo yeko
Enda yomunzvimbo mutambo – pamwe chete. Afadze vemuchikwata wako chienderane furo minwe. Kuderedza pachenyu mumhepo revanhu – zvakaoma varege unakirwe pavaiita chinozunguzirwa! Kana uri kunzwa kushinga, unogona edzai uye kuwana kudanana mashoko pamusoro Jumbotron.
4. Campout mbiri
Kunyatsoshandisa manheru iwayo chirimo. Pane zvakachipa, mafaro (uye kudanana zvachose) musi wakamirira chaipo necheseri yako. Akamisa tende, uye vane kudanana musi usiku snuggling pasi azere nyeredzi yezhizha!
A rwendo kuenda zoo ndechechokwadi iri yokusika musi pfungwa kuti vabudise mbudzana mamuri! With mhuka dzakawanda kudaro kuona, unogona kuzvizunguzira bhayibhayi kune netsa Anonyaradza. Enderera, kuratidza zuva rako chete kuti zvikara pamusoro pavo imi muri!
6. Berry kunonga
Summer ndiyo nguva yakakwana kuwana kunze uye tora pachako michero yenyu, uye zvinoita rakanaka kunonakidza uye rakasiyana musi pfungwa zvakare. Ipapo ugouya kumba pashure kurichinja michero avo kuva chinonhuhwira dhizeti vaitire.